China L-Cystine Mugadziri uye Mutengesi | Haitian
Pls shanyira webhusaiti yedu yepamutemo nekudzvanya: Jirong Mishonga Co, Ltd Haiti Amino Acid Co., Ltd.
Compund amino asidhi
L-Glutamic asidhi HCL
CAS Kwete.: 56-89-3
Yakajairwa: AJI, USP, mumba
Basa uye kunyorera: Inonyanya kushandiswa mukutsvagisa kwemakemikari, mushonga weakasiyana alopecia, mwaka wekudya, nezvimwe
Kavha: 25kg / bhegi (dhiramu), zvimwe sezvazvinodiwa
Pasherufu hupenyu: makore maviri
White crystalline kana crystalline upfu
Basa uye kunyorera:
L-Cystine haifanire kuvhiringidzwa necysteine, kubva kwayakatorwa. Cystine idhiidhiidhi yakasviba yeamino acid, cysteine, iyo inozivikanwa muzvikafu zvakawanda zvakaita semazai, nyama, zvigadzirwa zvemukaka, uye zviyo zvese.
L-Cystine inofungidzirwa kuti inoita basa muprotini synthesis, inotsigira moyo, hutano hwemwoyo, nemapapu. Zvingaitawo kubatsira ndangariro, kutarisa, uye kubatsira kuti uve nerunyararo runyararo Uye zvakare, Cystine inogona kubatsira kubatsira kune bvudzi rine hutano.
Inobatsira hutano hwemwoyo
Inosimudzira mapapu ane hutano
Aids ndangariro & kugona
Inopa kune yakadzikama pfungwa yekugara zvakanaka
Inoshanda kusimudzira bvudzi rine hutano
Inonyanya kushandiswa mukutsvagisa kwemakemikari, mushonga weakasiyana alopecia, mwaka wekudya, nezvimwe
Zvekutsvagisa kwemakemikari. Svikiro rezvipenga rakagadzirirwa. Iyo inoshandiswa mu biochemistry uye research yekudya. Iyo inogona kusimudzira iyo oxidation uye kudzikisira mashandiro emasero emuviri, kuwedzera machena maseru eropa uye kudzivirira kukura kwehutachiona hwehutachiona.
Inonyanya kushandiswa kune dzakasiyana alopecia. Iyo inoshandiswawo kuita diarrhea, typhoid, furuwenza uye zvimwe zvakanyanya kutapukira zvirwere, asthma, neuralgia, eczema uye dzakasiyana hutachiona hutachiona, uye ine basa rekuchengetedza mapuroteni kugadzirisa. Inoshandiswawo sekudya kwekudya.
Biochemical reagent yekugadzirira kweiyo yepamoyo svikiro. Icho zvakare chakakosha chikamu cheamino acid infusion uye mukomboni amino acid kugadzirira.
Izvo zvinobatsira mukukura kwemhuka, kuwedzera huremu hwemuviri, chiropa uye itsvo basa, uye nekuvandudza hunhu,
Inogona kushandiswa seyekuzora chirungiso kusimudzira ronda kupora, kudzivirira ganda allergy uye kurapa eczema.